Maxaa keenay soo laba kaclaynta weerarada Al Shabaab? | Dhacdo.com
Home Dhacdooyinka Maxaa keenay soo laba kaclaynta weerarada Al Shabaab?
Maxaa keenay soo laba kaclaynta weerarada Al Shabaab?
Ururka Al Shabaab ayaa waxaa muuqata in labadii bilood ee ugu dambeysay kordhiyeen weerarada ay ka gaysnayan gudaha dalka, oo ay xudun u tahay Magaalada Muqdisho.
Weerarada billihii ugu dambeeyay ka dhacay Caasimadda Muqdisho ayaa u badan miinooyin iyo kuwo isqarxinta, waxaana ku dhintay dad tiradoodu lagu qiyaasay soddon qof, oo rayid iyo askarba leh.
Magaalada Muqdisho oo ka gudbi la’ qaraxyada soo noq noqday ayaa waxaad mooddaa inay ku timid habacsanaan dhanka xoogaga ammaanka ah, oo xilligan loo fishay inay saameysay xaaladaha siyaasadeed ee dalka ku soo kordhay, laga soo bilaabo murunka hareeyay arrimaha doorashooyinka iyo weliba kalsooni kala noqoshadii Xildhibaanada Golaha Shacabka ku sameeyeen Xukuumaddii Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre.
General Cabdulqaadir Cali Diiriye (Subxaanyo) oo muddo dheer ka tirsanaa Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, waxna laga weydiiyay in weerarada ku yimaadeen bal inay dowladda amnigii dayacday iyo in kale ayaa sheegay inay taasi tahay mid iska cad.
“Taa way iska cadahay amnigii oo dhan baa faraha ka baxay, amnigii baa gacanta ku jirin. Mar haddii amni la’aan dhacdana waxaan iyo wax ka daranba way imaanayaan.” Ayuu yiri General Cabdulqaadir Cali Diiriye.
General Subxaanyo ayaa aaminsan inay jiraan askar xiriir la leh maleeshiyada Al Shabaab, una fududeynaya weerarada ay ka gaysanayaan Caasimadda Muqdisho.
“Midda kale Shabaabkii ayaa ku soo dhex dhuuntay, wixii dhacayaa dhacay. Waxaa jira qaar xiriir la leh nimankan Shabaabka, oo markiiba u fududeynaya waxaan inay dhacaan.” Ayuu yiri General Subxaanyo oo la hadlay VOA.
In muddo ahba waxaa Magaalada Muqdisho ka dhacayay weerarada dadka badani ku dhimanayaan, taasoo loo aaneeyo Madaxtooyada Qaranka oo aan cashar ka baran weerarba weerarka kale ee ka dambeeya.
Dadka ku xeeldheer arrimaha ammaanka ayaa qaba in xaaladaha ceynkani oo kala ah looga gudbi karo, iyadoo laga warqabo arrimaha ciidamada iyo qaabka ay uga hawlgalaan kontoroolada amniga lagu hubiyo ee magaalada ku yaala.